आदर्श विद्यार्थी, गुरु र अभिभावकको त्रिवेणी : भक्तबहादुर राई | मझेरी डट कम
editor — Fri, 09/07/2018 - 00:13
सिरहा जिल्लाको गोलबजार नगरकै प्रकाण्ड शैक्षिक व्यक्तित्व भनी चिनिएका भक्तबहादुर राई पिता जुगुतबहादुर राई माता लक्ष्मीदेवी राईको ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा वि.सं. २०१६ कात्र्तिक १५ गते शुक्रबार गोलबजार–२, सिरहामा जन्मेका हुन् । उनका पुर्खाहरू करिब डेढ शताव्दिपूर्व दिक्तेलको दिङलुङबाट लालपुर–३, टोडके, सिरहा झरेका थिए । सुझबुझको कमिका कारण उनका हजुरबुबा र बुबाहरूले गरिबीमै जन्मेर गरिबीमै बिदा भए । उनले भने मामाहरू लक्ष्मण राई र भरत राईको मद्दत र संरक्षणमा राम्रो संस्कार र शैक्षिक वातावरण पाए । फलस्वरूप गरिबीलाई घटाउँदै र हटाउँदै गए ।
वि.सं. २०२० सालमा सिरहाको जमदह विद्यालयबाट शिक्षारम्भ सुरुआत गरेका राईले त्यसपछि तितरिया स्कुलमा समेत पढी कक्षा ६मा श्रीजनता माध्यमिक विद्यालय, गोलबजार–४, सिरहामा भर्ना भई कक्षा ७सम्म अध्ययन गरेका थिए । त्यस माथिको शिक्षाका लागि वकिल मामा लक्ष्मण राईको सल्लाह र भरोसामा उनी चन्द्र माध्यमिक विद्यालय, सिरहामा कक्षा ८मा भर्ना भए ।
त्यहाँ उनले हुनसम्मको दु:ख पाए । त्यसबेला विद्यालय र छात्रावास दुवैको शुल्क तिर्नु पर्थ्यो । सधैँ घरैबाट खर्च धान्न सक्ने अवस्था थिएन । गाउँघरतिर पढाइ–लेखाइलाई अनुत्पादक काम ठानी निरुत्साहित गर्ने काम मात्र हुन्थ्यो । खर्च सकिएर टाट पल्टेको समयमा उनले पढाइलाई बिट मार्ने विचार पनि गरेका थिए तर मामा लक्ष्मणले तत्कालीन गर्जो टारिदिए र डटेर अध्ययनमा जुट्न खबरदारी गरिरहे ।
उनी विगत सम्झँदै भन्छन्– जमदहका प्रधानाध्यापक सुरेशलाल दास कर्णको मायालु र प्रेरणादायी क्रियाकलापले पढ्दा सबैको मनमा बस्न ठाउँ पाइँदो रहेछ भन्ने बुझेँ । उनले पढाउँदा कक्षा नै मन्त्रमुग्ध हुन्थ्यो । न हातमा छडी हुन्थ्यो न उनी हकारपकार नै गर्थेँ । आफू पनि सफासुग्धर र उच्च आचरणमा हुन्थे, हाम्रा कमजोरीलाई पनि केरकार गरी सुध्रने उपाय सुल्झाइदिन्थे ।
एक रात दुई बजेतिर उनी छात्रवास निरीक्षण गर्न आएछन् । डिबियाको पिलपले उज्यालोमा मलाई एकोहोरो चित्तले पढिरहेको देखेछन् । मेरो मेहनतबाट खुशी भएर उनले विद्यालय शुल्क माफ गरिदिए । मेरो लागि त्यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार थियो ।
ब्रिटिस सेनाबाट फर्केका माधव शर्मा अङ्ग्रेजी शिक्षक थिए । उनले अङ्ग्रेजी विषय पढाउँदा अति नै प्रभावित भएको र अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक बनी देश र जनताको सेवा गर्ने प्रेरणा लिएको अनुभव सुनाउँछन् । अर्का विज्ञान शिक्षक रामशरण महासेठ पनि कुशल र सहयोगिरहेको उनको बुझाइ छ । यिनै शिक्षकले छात्रावासको शुल्क तिरिदिएका थिए । उनको त्यो गुण सम्झँदै राई अगाडि भन्छन्, “सरले त्यत्ति नगर्दिएको भए म अल्लारे ठिटो कता बरालिने थिएँ, थाहै थिएन । सबैको साथ–सहयोग र मायाले नै म उठ्न सकेको हुँ ।”
त्यसवेला श्रीजनता माध्यमिक विद्यालय, गोलबजार–४, सिरहामा धर्मविनोद उपाध्याय प्रधानाध्यापक थिए । उनी पनि नीतिले प्रशासन चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । त्यही स्कुलमा २०३४ सालमा राईलाई प्राथमिक तहको अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्त हुने सौभाग्य जुर्यो । त्यसपछि भने उनलाई परिवार पाल्न सहज हुन थाल्यो । गाउँ–समाजबाट सम्मान मिल्न थाल्यो । उनका काला दिन दिनानुदिन उज्याला हुँदै गए ।
त्यसबेला झापा विद्रोहको प्रभाव चारैतिर फैलिएको थियो । गोलबजारको लोकराजमार्ग उत्तरतिर बामहरूको पकड भएको स्थान मानिन्थ्यो । बुर्जुवा शिक्षा आर्जन गर्नु पुँजिपति वर्गलाई पृष्ठपोषण गर्नु हो भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो । उनको घर लोकमार्ग उत्तरतिरै परेकाले बामआन्दोलनमा प्रत्येक्ष/परोक्ष उनी पनि मुछिए । पेशेवर मान्छेले पेशालाई असर पार्ने राजनीति गर्नैहुन्न भन्ने मान्यता लिएर चुप रहे पनि अरूको नजरमा पत्याउने कुरा थिएन । किनकि लोकमार्ग उत्तरतिर बामआन्दोलनको आँधीबेहरी नै आएको थियो । त्यसले त्यहीँ रहनेलाई नछुने कुरै आउँदैनथ्यो ।
त्यही कारण अरू शिक्षक चाँडै स्थायी हुँदा उनी राजनैतिक प्रतिशोधका शिकार भएर स्थायी हुन सकेनन् । त्यसबेला सुन्दरमणि उपाध्याय सहायक प्रधानाध्यापक थिए । उनी माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी पढाउँथे । राई गीत गाउन, कविता भन्न र साहित्यका कुरा गर्न माहिर थिए । र, उपाध्याय चाहिँ त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुन रुचाउँथे । उनीहरू दुवैको रुची एकै भएका कारण मनसाय साटासाट हुन्थ्यो ।
उपाध्यायले आफ्नो घन्टी राईलाई दिन थाले । प्राथमिक तहको शिक्षक भए पनि उनले अङ्ग्रेजी पढाउन ९ र १० कक्षामा जाने सौभाग्य पाए । विद्यार्थी र अभिभावकलाई आफ्नो क्षमताबोध गराउने अवसर भेटे । उनको लोकप्रियता बढ्दै गयो । अङ्ग्रेजी शिक्षक बन्ने विद्यार्थी जीवनको सपना पूरा हुँदै गएको अनुभव गर्न पुगे ।
उपाध्याय सर काठमाडौँ सरुवा भएर गएपछि उनले नै अङ्ग्रेजी पढाउने जिम्मा पाए । २०४४ सालमा आयोग खुल्यो र उनी माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षक बनी कार्यरत विद्यालयमै पुनर्नियुक्त भए । उनलाई सपना देख्न सके पूरा हुने रहेछ भन्ने एकिन भयो ।
शिक्षण जीवनलाई निरन्तरता दिँदै उनले आई.एड., बी.एड. र एम.एड.सम्मको अध्ययन वीरगञ्ज, विराटनगर र काठमाडौँबाट प्राइभेट विद्यार्थीका रूपमा पूरा गरे । र, आफ्नो बौद्धिक हैसियत उच्च पारे ।
उनी भन्छन्, “आधारभूत तहको शिक्षामा कसैले पनि हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुन्न । नत्र शिक्षामा भद्रगोल देखापर्छ । अहिले हामी त्यही नियति भोगिरहेका छौँ । कम्तीमा पनि विद्यार्थीलाई ४/५ वर्ष जग खन्न लगाउनुपर्छ । आधारभूत कुरा सिक्ने र सिकाउने वातावरण र मनस्थिति हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य ! हामी त्यस मनस्थितिमा छैनौँ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीले बाह्रखरीसम्म नछिचोली दुईमा पठाइहाल्ने अवस्था छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको नकारात्मक पाटो मात्र अपनाएर हामी पनि सरासर नयाँ कक्षा चढाउँछौँ । कसैलाई रोक्न खोजे अभिभावकहरूको बोली सुनेर नाजवाफ हुन्छौँ ।
विश्वासमा पर्ने खालको अभिभावकको बोली सुनिन्छ, “मैले काम नलगाईकन सधैँ स्कुल पठाएको छु । यस पटक पास गराइदिनू । अर्को पटक आफैँ पास हुन्छ । हामी घरमा रेखदेख पुर्याउँछौँ । तपाईंहरूमात्र शिक्षक हैन हामी पनि हाम्रा बच्चाका असली शिक्षक हौँ । अगाडि बढ्न दिनु न ! यिनलाई रोकेर अपराधको भागिदार किन बन्नुहुन्छ ?”
राईको विश्लेषमा बोर्डिङ स्कुलको शिक्षा त्रिभुजजस्तो छ अर्थात् तल सुकेको माथि फुकेको छ । सरकारी स्कुलको शिक्षा चाहिँ उल्टो त्रिभुज अर्थात् तल सुकेको माथि फुकेको छ । बोर्डिङ स्कुलमा नर्सरी, एल.के.जी, यू.के.जी.पार गरी कक्षा १मा पुग्न ३/४ वर्ष लाग्छ । सरकारीमा स्कुल टेक्नासाथ कक्षा १मा भर्ना हुन पाउँछन् । बालविकास कक्षाहरूको व्यवस्थापन पनि गुणात्मक छैन । बालुवामा पानी खन्याए सरह छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सर्वत्र प्रचारात्मक रूपमा लगेझैँ गरी गुणात्मक सिकाइलाई पनि अभियानकै रूपमा लानुपर्छ । शैक्षिक गतिविधिका कुराहरू तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा मात्र सीमित नगरी कक्षाकोठासम्म लैजानुपर्छ । विद्यार्थीको लय र भाकामा उसैको मस्तिष्कसम्म घुसाउनुपर्छ । राम्रो गर्ने विद्यार्थी र तिनका शिक्षक दुवै पुरस्कृत गरिनुपर्छ । विद्यार्थीका अभिभावकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । राम्रो गर्न सक्नेलाई पृष्ठपोषण दिनुपर्छ, राम्रो गर्ने/गराउने वातावरण दिलाउनुपर्छ । विद्यालय प्रशासनले बेलाबेलामा खबरदारी गरिरहनुपर्छ । पुनर्ताजगी कार्यक्रम चलाइरहनुपर्छ ।
उनी अगाडि थप्छन्– अभिभावकको बच्चा सपार्नु परम दायित्व हो । आफूले राम्रो व्यवहार प्रदर्शित गरेमा मात्र बच्चा सप्रन्छन् । किनभने अरूले गरेको देखेर नै विद्यार्थीले सिक्छन् । यस सम्बन्धमा उनले अभिभावक नै बच्चाको सर्वैसर्वा होइन, बच्चामा पनि आफ्नो ओजन हुन्छ भन्ने बारे सानो कथा पनि सुनाए–
एक परिवारमा दुई छोराको बुबा जाँड–रक्सीको लतमा फँसेको रहेछ । त्यही लतले चाँडै धरती पनि छाडेछ । जेठो छोरा बुबाकै बाटो समाएर नामी जड्यहाँ भएछ । ऊ धन र इज्जत दुवै सकेर कंगालपति भएछ । कान्छोचाहिँ त्यस इलाकाकै सज्जन र विद्वान् कहलिएको रहेछ ।
जेठाको जवाफ आएछ, “मेरा गुरु बुबा हुन् । उत्तिखेर ठूलाबडाले जे गर्छन्, त्यो निसंदेह ठिक हो भन्ने लाग्थ्यो । बुबाले खाँदा मैले पनि खाएँ, आनन्द आउँदै गयो । अहिले आएर विचार गर्छु– मैले रक्सी खाएको रहेनछु, रक्सीले मलाई खाँदो रहेछ । अब त प्राण छोड्न सकूँला तर बाल्यकालदेखि लागेको बानी छाड्न सक्तिनँ ।”
असल मान्छे कसरी बन्नुभयो भन्ने पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा कान्छोले चाहिँ भनेछ, “हो, मेरा पनि गुरु बुबा नै हुन् । त्यसबेला बुबाका हरेक पाइलाको प्रतिफल बारे मैले विश्लेषण गरेर त्यो सरासर जीवन बर्वादीको सरलमार्ग रहेछ भन्ने बुझेँ । बुबा रक्सीले टिल्ल मातेर नालामा सुत्नुहुन्थ्यो । रगत छादेरै मर्नुभयो । कहिलेकाहीँ गलतमार्ग मेरा खुट्टा गए, बुबाकै हविगतको सम्झना आउँथ्यो । र, म सतर्क भइहाल्थेँ । सही मार्गमा हिँड्ने कोसिसस्वरूप म यस ठाउँसम्म आइपुगेको हुँ ।”
माथिको कथाबाट नकारात्मकतामा सकारात्मकता खोज्ने भाइ सफल भएको र नकार र सकार चिन्ह नसक्ने दाजु जीवनमा असफल भएको बुझिन्छ । राईको मतानुसार संसार गलत होस् तर आफू गलत हुनुहुँदैन भन्ने थियो । ‘ढुङ्गाको काप फोरेर पनि पिपल उम्रन्छ’ भनेझैँ गर्ने बच्चाले जस्तोसुकै परिस्थिति र वातावरणमा पनि गरेर देखाउँछन् । अभिभावकले बाटो विराएमा बच्चाले जान्ने–बुझ्ने भएपछि स्वय म खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।
गोलबजार लागि भक्तबहादुर राई एक विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको नाम हो । एक समय तोतेबोली नहट्दै गर्दा उनी लुरुलुरु विद्यालय आउँथे, घरपरिवारमा चञ्चले भए पनि विद्यालयमा चाहिँ भद्र विद्यार्थीका रूपमा गनिन्थे । वाल्यकालमा उनको बुझाइ थियो– शिक्षक सर्वज्ञानले सम्पन्न हुन्छन् । आवश्यक ठाउँमा ज्ञान छर्न र जथाभावी छरिएको ज्ञान समेट्न खटाइएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूसँग विद्यार्थीको मनका कुरा जान्ने र बुझ्ने खुबी हुन्छ । अत: कसै गरे पनि शिक्षकको आँखा छल्न सकिन्न र छल्यो भने पनि मूर्ख भएर जीवन धान्नुपर्छ ।
वाल्यकालदेखि नै उनी अध्ययनमा अब्बल थिए, जिज्ञासु स्वभावका थिए । जमदह स्कुलमा छँदा आउँदा जाँदा साथीहरू आफ्नै सुरमा हुन्थे उनी भने झुम्राको भकुन्डोलाई तात्तले खेलाउँदै स्कुल पुर्याउँथे र स्कुलबाट घरै ल्याइप्ुर्याउँथे । त्यसो गर्न पाएकोमा उनी आनन्दित हुन्थे । र, कसैले वाधा–व्यवधान पुर्याए चिढिन्थे । मानौँ, उनी खेलप्रतिको आफ्नो अव्यक्त अनुराग प्रकट गरिरहेका हुन्थे ।
शिक्षक मुस्कुराए अनि उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “भक्तबहादुर ! भन, त ! पानी रुख चढ्छ कि चढ्दैन ?”
शिक्षक खुशी भए र भने, “आवश्यकता परे पानी रुख पनि चढ्छ तर स्वभावले हैन फोर्सले मात्रै चढ्छ । जस्तै– कलको पानी मोटरले तानेर छतको ट्याङ्कीमा उकालो हुत्याउँछ । त्यही पानी हाम्रो वाथरुममा आइपुग्छ । भकुन्डोको स्वभाव नै ओरालो झर्ने हो, फोर्स लगाएमा उकालो पनि जान्छ तर धिमा गतिमा । यो सबै पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको कारणले हो ।”
आफूले पढेर छाडेको कक्षामा आधारभूत तह (कक्षा १–५) को फुच्चे शिक्षक बनेर पुग्न पाउँदा गौरवले छाती ढक्क फुल्थ्यो । आफ्नै छरछिमेकका नानीबाबुलाई बाह्रखरी खटाउँदा बेग्दै आनन्द आउँथ्यो । अँझ, गाउँघरतिर ‘माष्टर बाबु’ भनेर पुकारिँदा गर्वले शिर सगरमाथा नै हुन्थ्यो ।
विद्यार्थी–शिक्षक, शिक्षक–विद्यार्थी कहिले यता कहिले उताको अनुभवले उनको जीवन खारिँदै गयो । प्रा.शि. हुँदै मा.शिसम्म आइपुग्दा अनेकन उतारचढाव वहन गर्नुपर्यो । अर्कातिर साधारण शिक्षकबाट प्रधानाध्यापकसम्मको यात्रामा बेग्लै जिम्मेवारी बोध भयो ।
एक प्रसङ्गमा शिक्षकहरूसँग भनेका थिए– म त बच्चामा विलक्षण दक्षता देख््छु । मलाई लाग्छ– बच्चालाई सपना देख्नबाट बञ्चित पार्नुजस्तो अर्को अपराध केही छैन । आफ्नो तर्फबाट विद्यार्थी समस्यामुक्त भए भने हरेक पटक नोबेल पुरस्कार जितेको सम्झन्छु । बच्चाको संगत पाए संसारको सबै खुशी भेटेको अनुभव हुन्छ । हामीले जहिल्यै पनि विद्यार्थीले जानेको भाषामा सिकाए उसले कुरा त बुझ्छ र त्यो मस्तिष्कसम्म पनि जान्छ तर उसकै मातृभाषामा सिकाए उसको दिलसम्म पुग्छ र ऊ कहिल्यै भुल्दैन । तसर्थ विद्यार्थीकै भाका र लयमा शिक्षकले आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ ।
अर्कातिर बच्चालाई खेलौना नदिए क्षणभर रुन्छ तर संस्कार नदिए जीवनभर रुन्छ । तसर्थ हामीले बच्चालाई पहिले संस्कार दिनुपर्छ । त्यो हामीबाटै बच्चाले अनुकरण गर्ने गर्दछ । तसर्थ घरपरिवारमा अभिभावक र विद्यालयमा शिक्षक संस्कारयुक्त हुनु जरुरी छ । हामी किताबभन्दा बाहिर निक्लन हिच्किचाउँछौँ । किताब त सिकाउने एक माध्यम हो, त्यो कहिल्यै पनि पर्याप्त हुँदैन । बाँड्ने कुरा सञ्चित गरेर आफूसँग मात्र राख्नु किमार्थ उचित होइन किनभने ज्ञान बाँडे बरू बढ्दै जान्छ तर कहिल्यै घट्दैन ।
विद्यार्थीहरूलाई होस्सहितका जोसिलो हुन प्रेरित गर्दै भन्थे– नानीबाबु हो ! म तिमीहरूकै साथमा हुन्छु, टाढा हुन्न । तिमीहरू अरूको खुशी लेख्ने पेन्सिल बन्न नसकौला तर दु:ख मेट्ने इरेजर अवश्य बन्न सक्छौ । मान्छेले जीवनमा अनेकौँ समस्या पनि भोग्नुपर्छ, त्यसलाई छिचोल्दा सफलता प्राप्त हुन्छ, सफलताले आनन्दै आनन्द अनुभूत गराउँछ । यसका लागि एउटै लक्ष्य, त्यसकै ज्ञान, त्यसमै मेहनत र त्यही प्राप्त गर्न दृढ सङ्कल्पित रह्यौ भने कहिल्यै असफल हुनुपर्दैन ।
अँध्यारो मुहार लगाएका विद्यार्थी भेटे उहाँको कथन हुन्थ्यो– तिम्रो अनुहारमा नाचिरहने मुस्कान जीवनको उपहार हो, त्यसलाई आँसुले पखाल्ने र क्रोधले मेट्ने काम बन्दै नगर । बरू मुस्कानलाई सधैं–सधैं अनुहारमै नाच्न देऊ किनभने त्यसको घर मान्छेको अनुहार नै हो । अर्कातिर हामी एक्लाएक्लै जन्म्यौँ, एक्लाएक्लै मर्छौँ पनि । तसर्थ आफ्नो भाग्य पनि आफैँ लेख्नुपर्छ, अरूलाई लेख्न दिनुहुन्न । निराश हुनु भनेको आफ्नो कर्ममा आफैंले अविश्वास गर्नु हो । विश्वासले मात्रै सफलताको स्वाद दिलाउँछ ।
उनी अगाडि थप्थे– मान्छेले कहिल्यै पनि अहङ्कारले शिर उच्च पार्ने धृष्टता गर्नुहुन्न, नोबेल पुरस्कार विजेता पनि शिर झुकाएरै सम्मानित हुन्छन् । नम्रता नै मानिसको पहिलो परिचय हो । हाम्रो बोलीले नै धेरै जसो समस्या जन्माउने र समाधान गर्ने गर्दछ । के भनेरभन्दा पनि कसरी भनेर समस्या पैदा भएको हो । नम्रतापूर्वक भनिएको कटु पनि गुलियो मानिन्छ । मान्छेको दिलमा सहजै बस्छ । त्यसलाई सम्मान गर्न जो पनि तत्पर रहन्छन् । राम्रो कुरा कटु पाराले भने संदेहजनक हुन्छ । संदेहमा विश्वासको बास हुन्न । विनाविश्वास जगत् चल्दैन ।
बदला लिएर हैन आफूलाई बदलेर समस्याको समाधान हुन्छ । झैंझगडाले सम्बन्ध टुटाउनुको साटो सम्बन्ध बढाएर झगडालुलाई जुटाउनु ठूलो कुरा हो । आफूसँगकै वस्तुमा सन्तोष गर्ने नै सबैभन्दा धनी हुन्छ । अरूको कमजोरीलाई हँसीमजाकमा बदल्नुहुन्न किनभने सबैसँग कमजोरिरहन्छ र अरूसँग पनि हँसिमजाक गर्ने सामर्थ्य हुन्छ । जीवन प्रतियोगिता नभई यात्रा हो, यसलाई आफ्नै लय र सूरमा हिँड्न दिनुपर्छ । नकारात्मक विचारले सकारात्मक जीवन जिउनै सकिन्न, अत: तुरुन्तै नकारलाई सकारमा परिणत गर्नु आवश्यक छ । क्रोधले क्रोध काबुमा आउँदैन विपत्ति मात्रै आउँछ ।
४. र, अन्त्यमा
श्रीजनता माध्यमिक विद्यालयमा भक्तबहादुर राई, चन्द्रनारायण साह र शिवनन्दन यादवको अवकासपश्चात् हाल साधारण धारतर्फ माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०)मा नवनियुक्त प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र सिंह, सहायक प्रधानाध्यापक रामेश्वर कामती, प्राविधिक धार संयोजक वीरेन्द्र यादव, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक राजकुमार साह, नन्दलाल आचार्य, रामनारायण साह र आईटी अफिसर पदमा सरोज कुमार यादव कार्यरत रहेका छन् ।
त्यसै गरी आधारभूत तहको कक्षा आठसम्ममा चन्देश्वर साह, जनक साह, शिवचन्द्र सिंह, वलराम यादव, शशिकुमार साह, सुशीला श्रेष्ठ, तुलसा काफ्ले र नरेश पाल कार्यरत छन् । आधारभूत तहको कक्षा पाँचसम्ममा ज्योति सिंह, गौरी यादव, विमला झा, लोचन साह, सुमित्रा योञ्जन र बालकुमारी दाहालले शिक्षण गरिरहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीमा रामेश्वर साह, सहदेव साह र हरिकिशोर कामती साथै बालविकास शिक्षकमा सम्झना यादव काम गरिरहेका छन् । सबै शिक्षकमा उच्च तहको ज्ञान छ र माथिल्ला कक्षामा पढाएको अनुभव छ ।
यी सबै प्रशासक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सम्बोधनका क्रममा भक्तबहादुर राईले पटक पटक हात जोडेर भने, “सबैलाई विनम्रताका साथ भन्दछु, मैले शिक्षक र प्रशासकको हैसियतले विद्यालयका लागि राम्रो जे जति गरेँ, त्यसको प्रेरणास्रोत तपाईंहरू नै हुनुहुन्छ । तपाईंहरू सबैको साथ र सहयोगले मात्र संभव भएको हो । नराम्राका लागि मस्वय म जिम्मेवार छु र कसैको मन दुख्ने काम भएको रहेछ भने क्षमा चाहन्छु ।”
उनले विगत कोट्यादै भने– एक पटक कक्षा ५ को विद्यार्थीले थर्सडेको स्पेलिङ गलत लेखेको ठानेर कान पक्रेर उठबस गर्न लगाएँ । उसले ठिक छ त सर भनेर किताब ल्याएर देखाउँदा लज्जित भएँ ।
यी दुवै घटनाक्रमबाट उनले विद्यार्थीहरूलाई जान्दैनन् भनेर कम नआक्न आग्रह गरे । आफूले पढाएरै जीवन र जगत् हेर्न र बुझ्न सकेको अनुभव बाँडे । वास्तवमा हामी कक्षामा एउटा विषयमा पारंगत भएर पस्छौँ तर विद्यार्थीहरू सबै विषयको जानकारी हासिल गरेर बस्छन् । उनीहरू समूहमा मिलेर जस्तोसुकै समस्या समाधानमा अग्रसर हुन सक्छन् । खोजयात्रामा निस्कनु उनीहरूको धर्म हुन जान्छ । शिक्षकको भने विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको खोजयात्रामा निस्कन प्रेरित गर्ने, सहयोग पुर्याउने र आवश्यक परे पृष्ठपोषण दिने काम मात्र हुन्छभन्दा अतिशयोक्ति गरेको नठहर्ला ।
–शिक्षक, श्रीजनता माध्यमिक विद्यालय, गोलबजार–४, सिरहा ।
तीता पलका पाँजा मात्रै पँजाएर हुन्न
अनेकौँ दुर्भाग्यहरू बेहोरेका खलिल जिब्रान
हाइकु ५३ - ६४ " घुस पदार्थ "
भैगो अब छाडिदेऊ
पेड पौधासनके अदभूत दुनिया